(CIIE) တရုတ်နိုင်ငံ၏ သွင်းကုန်ပို့ကုန်ပြပွဲသို့ နိုင်ငံနှင့်ဒေသပေါင်း ၁၂၇ ခုမှ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၃,၀၀၀ နီးပါး ပါဝင်ပြသရန်ရှိ - Xinhua News Agency
ရှန်ဟိုင်း ၊ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ(offline) ပုံစံဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တရုတ်နိုင်ငံတကာသွင်းကုန်ပို့ကုန်ပြပွဲ(CIIE) သို့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ နှင့် ဒေသပေါင်း ၁၂၇ ခုမှ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီပေါင်း ၃,၀၀၀ နီးပါး ပါဝင်ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြပွဲကျင်းပရေးစီစဉ်သူက အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ထို့ပြင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၅၈ နိုင်ငံ နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း ၃ ခုကလည်း ပြပွဲကာလအတွင်း အွန်လိုင်းမှတဆင့် ပါဝင် တက်ရောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့အနက် ၁၅ နိုင်ငံက ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များကို ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း CIIE ဗျူရို ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Sun Chenghai က ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ ကျင်းပမည့် တရုတ်နိုင်ငံတကာသွင်းကုန်ပို့ကုန်ပြပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေမှုများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပြပွဲတက်ရောက်လာသူများအနေဖြင့် ဒီဂျစ်တယ်ပြခန်းထဲမှတဆင့် ခေတ်မီနည်းပညာသစ်များဖြင့်ဖန်တီးထားသော 3D ခေတ်မီပုံရိပ်ထုတ်စနစ် နှင့် အွန်လိုင်းရုပ်သံစက်ကိရိယာများ အသုံးပြုကာ ယင်းပြပွဲ၌ ပါဝင်ပြသမည့်နိုင်ငံများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းဆောင်ချက်များ ၊ စက်မှုထုတ်ကုန်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းများ ၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကို ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း Sun က ဆိုသည်။
ယခုနှစ်တွင် ပါဝင်ပြသမည့် နိုင်ငံအရေအတွက် နှင့် ကုမ္ပဏီအရေအတွက်သည် ပြီးခဲ့သောနှစ်က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် တတိယအကြိမ်မြောက်ပြပွဲထက် အရေအတွက် နှစ်ခုစလုံးတွင် ပိုမိုများပြားကြောင်း Sunက ပြောကြားခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတက်ရောက်ခွင့်ရမည့်(offline) ပုံစံကျင်းပသော ယင်းပြပွဲကို မြေဧရိယာအကျယ် ၃၆၀,၀၀၀ စတုရန်းမီတာပေါ်တွင် ခင်းကျင်းပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အစားအစာ ၊ မော်တော်ကား ၊ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ၊ ဆေးဝါးအသုံးအဆောင် နှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများ ကဲ့သို့သော နယ်ပယ်စုံက ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များ နှင့် နည်းပညာများကို ပြပွဲတွင် ပါဝင်ပြသွားမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိုမ့်ဆုံး နိုင်ငံ ၃၃ နိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၉၀ ကလည်း ပြပွဲတွင် ပါဝင်တက်ရောက်သွားရန်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။(Xinhua)
(CIIE) China’s import expo draws nearly 3,000 exhibitors from 127 nations, regions
SHANGHAI, Oct. 29 (Xinhua) — Nearly 3,000 businesses from 127 countries and regions will attend the 4th China International Import Expo (CIIE) scheduled offline from Nov.5to 10 in Shanghai, the organizer said Thursday.
A large number of the world’s leading enterprises in various sectors such as food, automobile, electrical engineering, medical equipment and cosmetics are expected to showcase their products and technologies at the expo. Meanwhile, 90 enterprises from 33 least developed countries will also attend the event, Sun said.
Photo(1) – Workers work ataproduction line of Jungheinrich AG in Qingpu district of east China’s Shanghai, Oct. 20, 2021. Jungheinrich AG,aleading intralogistics solutions provider based in Germany, would take part in the China International Import Expo (CIIE) for the fourth time this year. (Xinhua/Ding Ting)
Photos (2,3,4)– Preparation views of China International Import Expo (CIIE) which will held in Shanghai from Nov.5to 10